Global ကွန်ပျူတာသင်တန်း: January 2016
စီးပွားဖြစ် ကွန်ပျူတာသင်တန်း အိုင်ဒီယာ
Computer Training Business Ideas
Computers areasignificant part of everyday life at home and at work. Technology can help you organize your home finances or run your business but only if you know how to use the software, according to online small business resource Entrepreneur.com. A computer training business can beaprofitable venture if you start with good business ideas.
ကွန်ပျူတာများဟာ အိမ်၊ အလုပ် များ၏ နေ့စဉ်ဘ၀ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အရေးပါအရာအရောက်ရှိပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော နည်းပညာအကူအညီဖြင့် သင်၏ အိမ်သုံးငွေစာရင်းနှင့် သင့်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နေရာတကျစုပေါင်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ် သို့သော် သင့်အနေဖြင့် ကွန်ပျူတာအသုံးချ ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုတတ်ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ Online စံနစ်သုံး အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၊ ကွန်ပျူတာ သင်ကြားပေးသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများဟာလည်း အမြတ်အစွန်း ကျန်နိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန် အကြံအညဏ်ကောင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
One of the ways to help your computer training business become successful is to open up your services to private individuals and corporate clients, according to Entrepreneur.com. You can offer training levels that start at basic computer skills and then work up to advanced applications for anyone in their home, or corporate clients. You can also create some diversity in your services if you offer onsite as well as classroom training. Let customers know that onsite training is only for those students that pay, andaroll call will be taken to make sure only paying clients are receiving the training. The more diverse you can be in your offerings to clients, the better your chances at increasing your revenue.+
စားသုံးသူ (သို့) စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ
ကွန်ပျူတာသင်ကြားပေးသော တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက အောင်မြင့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် သင့်အား ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ၊ သင့်အနေဖြင့် သင်ကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်းကို ၀န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ တစ်ဦးတည်းအနေဖြင့် သိုလည်းကောင်း စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့် ကွန်ပျူတာသင်ကြားရာတွင် သင်ကြားပေးနိုင်သော အဆင့် Level များဖြင့် အခြေခံကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ အဆင့်မြင့် လက်တွေ့အသုံးချ ပရိုဂရမ်များသင်ကြားပြသပေးခြင်း ၊ သင့်၏ သင်တန်းခန်းမ တွင်သော်လည်းကောင်း အိမ်အရောက် သင်ကြားပေးခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုမျိုးလည်း ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသေးတယ် သင်ထံတိုက်ရိုက် သင်ကြားနိုင်ရန် လာရောက်သူများကို သင်တန်းခန်းမ များထားရှိသင်ကြားခြင်း၊ အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုများပေးခြင်း၊ သင်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သော ကွန်ပျူတာသင်ကြားခြင်း သင်တန်းသားများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ ပိုမိုများပြား လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ ၀င်ငွေများလည်း တိုးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Quality control is an important part of any business, according to online corporate resource Inc.com. After each training session, ask students to fill outasurvey grading the quality of the course. Encourage students to give feedback on the structure of the course, the quality of the learning materials and the instructor's command of the subject. Computer training requiresateacher that is able to bridge the gap between technology and its practical applications. By paying attention to the feedback from your students, you can make the necessary changes to your course offerings and the structure of your classes to increase the quality of your service.
စားသုံးသူ (သို့) စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၏ အကြံပြုချက်များ
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမဆို အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာသင်ကြားခြင်း သင်တန်းချိန်များ ပြီးဆုံးပြီးနောက် ကျောင်းသားများကို ပြန်လည်မေးမြန်ခြင်းဖြင့် စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့် သင့်၏ သင်ကြားပေးနေသော အတန်းကို အရည်အသေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြားမှုနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ကျောင်းသားများအား အကြံပြုစာတောင်ခံခြင်းများလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ သင်ကြားရေးတွင် အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများနှင့် သင်တန်းအတွက် သင်ကြားနေသော သင်ခန်းစာများ အရည်အသွေးပြည်ဝစေရန် ကြိုးပမ်းချက်များ၊ ကွန်ပျူတာ သင်ကြားပေးနေသော ဆရာများအနေဖြင့်လည်း နောက်ထပ်မံပေါ်ထွက်နေသော ပရိုဂရမ်အသစ်များကို ခေတ်နောက်ကျမကျန်ရှိစေဘဲ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ သင်အနေဖြင့် ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာသော သင်ခန်းစာများ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
Startingacomputer training business on your own can be risky. If you buy into an existing computer training franchise then there are several benefits to your business, according to online entrepreneurial resource Gaebler.com. A franchise computer training company will be able to give you important advice on what kind of location to look for, how to market to clients and what kinds of teachers to hire. A franchise company can also help you get the certifications you need to offer specified manufacturer training. The years of marketing exposure and experienceafranchise computer training company offers can also help your company to be more recognizable to potential clients. A franchise computer training company will help you keep your costs under control while offering youaproven name in the training industry.
နည်မည်ရှိပြီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား ငှားရမ်းသုံးပြုခြင်း
ကွန်ပျူတာသင်ကြားပေးသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါလျှင် သင်ကိုယ်ပိုင် အမည်ဖြင့် ထိုးဖောက်မည်လား၊ သို့မဟုတ် အခြားအောင်မြင်ပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်းတစ်ခုအား လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ရယူခြင်း ဟာလည်း စီးပွားရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေသော နည်းလမ်းဖြစ်တယ်၊ အခြားအောင်မြင်ပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်း အား လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ရယူခြင်းဖြင့် ၄င်းသင်တန်းမှာ အရေးကြီးသော စီးပွားရေးလုပ်ရမည့် နေရာ၊ ဈေးကွက်မည်သို့ဖော်ဆောင်ရမည်၊ စားသုံးသူများ၊ သင်တန်းအတွက် မည်သည့် Course များ ထားရှိသင်ကြားရမည်၊ သင်ကြားမည့်ဆရာများနှင့် ဆရာများ၏ အရည်အချင်းများကို ပြောကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအတွက် အဘိုးအခကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားအောင်မြင်ပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်း အား လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် ရယူခြင်းဖြင့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များကိုလည်း ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၄င်း သင်တန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ ကျော်ကြားပြီးဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းသားများ ရရှိမှုကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်၊ ပြီးနောက် franchise စံနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူတို့၏ စီမံထားသော သင်ကြားရေး Course များ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။